Nyowani Delta 8 THC CBD Affilate Sign Up Peji
Kugamuchirwa kuRed Emperor Collective Affiliate Welcome Page
Yekutanga Virtual Online Mutsara Wepasi Pose Dispenary Iyo Inobhadhara Makomisheni Kune Vayo Vashandisi
Nhanho yako yekutanga ndeyekuzadza fomu rekunyoresa, Kana iwe usiri wega webhusaiti uye waronga kusimudzira zvigadzirwa kuburikidza nesocial media wobva wapinda RedEmperorcbd.com painokumbira kuisa yako URL.
Hazvina mhosva kuti unogara kupi pasi iwe unogona kutanga kuwana mari izvozvi kuburikidza zviri pamutemo CBD uye Delta 8 THC kutengesa. Parizvino, Nyika chete yatiri kutengesa mairi iUnited States neCanada, asi nyika zhinji nekuwanda dzichinyoresa Mexico yakadai nekuwedzera ichatevera.
Kubhadhara kunoitwa Bi-Vhiki kune yako Paypal account.
Ko kana ini ndichigara mudunhu rakarambidza delta 8 ndinogona here kutora chikamu? Ehe, iwe unogona chete iwe kuti ushambadze zvigadzirwa zvedu kushamwari uye nhengo dzemhuri mune mamwe matunhu.
Dzvanya Pano Kunyoresa izvozvi uye uve chikamu chenhoroondo uye uwane mari yakawanda nekusimudzira yedu Delta 8 THC uye THC zvigadzirwa. https://redemperorcbd.com/affiliate-area/
Vese vanobatana vanofanirwa kutanga vagadzira yavo yega link munzvimbo yakabatana mushure mekunyoresa kutumira chinongedzo pawebhusaiti yako kana pasocial media platform tinya pane iyi link uye odha chimwe chigadzirwa. Nenzira iyi unogona kudzoka kune yakabatana nzvimbo uye nekuteedzera yako yega yekutengesa kuti uve nechokwadi chekuti iwe wakakweretwa uye wakabhadharwa nenzira kwayo. Kana iwe uchigara mudunhu rakarambidza Delta 8- THC wobva wahodha chigadzirwa cheCBD senge tincture, chipfuyo kurapwa, sunblock lotion, kana chero chimwe cheimwe 40 zvigadzirwa zveCBD dzatinazvo.
Yedu Affiliate Software chirongwa chinoteedzera ako vatengi kwehupenyu hwese. Yese mirairo yavanokuitira iwe unoramba uchiwana komisheni yeimwe yakanaka mari yekuzosara
Anofambidzana chirongwa manejimendi anotangisa gwara re newbies - AffiliateWP
Nzira ina dzekubatsira makwikwi ako kutanga nekutengesa bhizinesi rako - AffiliateWP
Maitiro ekuteedzera uye kuyera yako yakabatana chirongwa - AffiliateWP